Porters Grange Primary Chikoro chikoro uye chikamu chePortico Multi Academy Trust.
Southend Borough Council inogovera nzvimbo kuPorters Grange Primary School, ndokumbirawo ubate kwavari.
Hofisi yenharaunda iri pa:
Nhare: 01702 212934
Kana iwe uchida kuronga kushanya pachikoro chedu, ndapota fonera chikoro ichi pa0702 468047.
Chikoro chePuraimari Kunyorerwa 2020/21
Nyorera online pa: www.southend.gov.uk/admissions na 15th Ndira 2020.
Pane nzira mbiri dzekuita yako kunyorera nzvimbo yechikoro; zvinogona kuitwa chero:
1. Pamhepo kuburikidza webhusaiti webhusaiti (ona pamusoro) kana
2. Pachikumbiro chepepa, makopi acho anowanikwa kumahofisi eKanzuru kuCivic Center, Victoria Avenue.
Iyo online system inokurumidza, yakachengeteka uye yakavanzika. Zvinotarisirwa kuti semakore apfuura vabereki vazhinji sezvinobvira vanozonyorera online kwenzvimbo dzepuraimari nzvimbo munaGunyana 2020.
Zvakanakira kuita yako application pamhepo ndeizvi:
* nzvimbo yepamhepo inowanikwa maawa makumi maviri nemana pazuva uye mazuva manomwe pavhiki kusvika pakati pehusiku pazuva rekuvhara 15th Ndira 2020;
* pane zvinongedzo kumawebhusaiti echikoro kuitira kuti ugone kuwana rumwe ruzivo nezvezvikoro zvepuraimari usati wasarudza pane zvaunofarira;
* iwe unogona kupinda mukati uye wotarisa fomu rekunyorera remwana wako uye iwe unogona kuita shanduko kune izvo zvinyorwa pane fomu rekunyorera kusvika pakati pehusiku pazuva rekuvhara;
* iyo sisitimu yakachengeteka uye ine akateedzana ezvekuchengetedza maitiro ayo anochengetedza iwo ruzivo rwunopihwa rwakachengeteka;
* hapana njodzi yekuti kunyorera kwako kucharasika muchipfuva;
* iwe unogona kupinda mukati uye wotarisa chikoro chemwana wako paNational Offer Day kubva chero kupi pasi uye chinopihwa chinotumirwawo neemail pazuva rekupa (hapana makopi akaomarara anotumirwa);
* iwe unogona kugamuchira kupihwa kwechikoro nzvimbo pamhepo uye ndokumbira kuti mwana wako achengetwe pane yekumirira runyorwa.
Zvikoro zvakagamuchirwa: zvikumbiro zvevana vekunze kwenyika
Muzviitiko zvakawanda, vana vanouya kubva mhiri kwemakungwa vane mvumo yekuenda kuzvikoro muEngland.
Ibasa revabereki kutarisa kuti vana vavo vane kodzero here, pasi pemamiriro avo ekupinda mavhiza, yekudzidza pachikoro. Kubatsira vabereki tinokurudzira kuti avo vanoshuvira kunyorera chikoro chinobhadharwa nehurumende vatarise kuti vane kodzero yekugara here kana mamiriro evhiza yavo neimwe nzira vobvumidza kuwana chikoro chinotsigirwa nehurumende.
Vatorwa vekunze havagone kushandisa iwo mavhiki matanhatu evashanyi vhiza kana mwedzi mitanhatu-pfupi-yekudzidza vhiza kuti vapinde muUK kunyoresa semudzidzi pachikoro. Tsvaga kuti mavisa aya anokwanisa kushandiswa kupi pavisitor vhiza uye pfupi pfupi kudzidza mapeji emavisa.
Tsvaga zvimwe shanyira iyo Dhipatimendi redzidzo .
Dzvanya kuti utore
Kodhi yekubvuma yechikoro
Portico Consulation Admissions Tsamba
Kugamuchirwa Kurongeka 2022